1. Ememme obi ụtọ na-eru nso na njedebe nke afọ. Ọtụtụ mmadụ na-akwado onyinye Afọ Ọhụrụ. Ma ọ bụ gị ga-eme ya n’onwe gị Ma ọ bụ zụta onyinye iji nye ndị ị hụrụ n'anya Ọ ga-abụkwa na ọtụtụ ndị nne na-akwadebe ụmụ ha onyinye ka ha sonyere ndị enyi ha n’ụlọ akwụkwọ. Dị ka onyinye ma ọ bụ icho mma a na na na na Christmas na-adịghị mgbagwoju anya Ọ na-enyekwa obi ụtọ ma onye nyere ya ma onye natara ya.
2. Akụrụngwa Etu esi kechie igbe square
3. - Onyinye onyinye Họrọ n'ụzọ masịrị anyị ma ọ bụ kwekọọ n'ụdị onye na-enye enye. Maka ndị okenye, họrọ agba dị mfe, maka ụmụaka, ha bụ usoro katuunu. Ma ọ bụ ụkpụrụ dị iche iche, mara mma ma na-enwu gbaa - ụta ma ọ bụ rịbọn, họrọ n'ụzọ dabara na agba akwụkwọ Nwere ike ịbụ otu ụda ma ọ bụ agba agba, ụfọdụ ndị na-eji okooko osisi akpọnwụ, okooko osisi ọhụụ, ma ọ bụ dị mfe ịme naanị gị, ọ bụ naanị na ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Enwere ike iji ya Ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ndị ọbịa toro eto ma ọ bụ onye isi ahụ, ọ nwere ike ịdị mkpa ịhọrọ igbe dị mfe na agba, dabere na oge na ihe kwesịrị ekwesị.
4. Zọ dị mfe iji kechie square ma ọ bụ igbe onyinye
5. - Tinye igbe onyinye na mpempe akwụkwọ na-achapu. Ma debe nkuku nke igbe ahu na akuku ya abuo, uzo ozo dika akuku ½ nke igbe eji ya na elu ¼ nke igbe dika egosiri na foto mbu, nke gha aghapu onu ya. Maka ịdị mma n'anya Dika igbe nke anyi choro.- Were akwukwo kpuchie nkera nke igbe. Wee rapara mama ma ọ bụ teepu nwere ihu abụọ. - Weta n'akụkụ nke ọzọ nke akwụkwọ ahụ agbakọtara na gluu. Ma ọ bụ nrapado n'akụkụ abụọ - teepu ọzọ maka nkwụsi ike na eziokwu N'ezie ọ bụghị ịda. - Top igbe. Pịa etiti ka ọ daba n'ọnụ ya. Ma apịaji n'ọnụ ya mara mma - wee tinye ya dị ka ihe osise Gbakwunye teepu transperent - kee eriri mpekere dịka eserese. Ma ọ bụ ụfọdụ n'ime gị nwere ike iyi ya dabere na mmasị gị na ihe okike gị. - Kee ụta nke okooko osisi a mịrị amị ma ọ bụ okooko osisi ọhụụ dịka ọ masịrị gị.
6. Ihe ndozi igbe mara mma na-agbakwunye agba na obi ụtọ na ezinụlọ.
7. N'oge ekeresimesi Enwere ike kechie igbe dị iche iche na agba dị iche iche ma debe n'okpuru osisi ahụ. Ma ọ bụ tinye ọtụtụ onyinye n'ime igbe ka ụmụaka nwee obi ụtọ ịmeghe onyinye ha nwetara. Chegodi inwe Santa Claus. Weta onyinye More ọchị Na imere ụmụ nkịta ụlọ na ezinụlọ n'ụzọ ọzọ Enwere ike ime nke a n'onwe gị n'ụzọ dị mfe, gbakwunye igbe akpọrọ n'obi Emere na ịhụnanya Onye nnata ahụ ga-enweta nlekọta na ihu ọma. Na ihe okike a na-akparaghị ókè Mgbe nke a gasiri, ka anyi jikere ime igbe onyinye dika anyi !!